STEEMIT မှသည်​ ပုံမှန်​ဝင်​​ငွေ သို့ — Steemit
STEEMIT မှသည်​ ပုံမှန်​ဝင်​​ငွေ သို့
lwanwai (57) in myanmar •3months ago (edited)
ကျွန်​​တော်​ ဒီရက်​ပိုင်း Steemit ​ပေါ်ကို မ​ရောက်​ဖြစ်​ပြန်​ပါဘူးဗျာ။
ဘာလို့လဲ ဆို​တော့ သင်​တန်း​လေး​တွေ သွားတက်​ပြီး ပြန်​လည်​ ​လေ့လာ​နေရလို့ပါဗျာ။
အချိန်​ရရင်​ ရသလို Steemit ကိုလာ​ရောက်​ရတာ​ပေါ့ဗျာ။
ခုကျွန်​​တော်​ တို့ Steemit မှာ စာ​ရေး​နေသူ​တွေအတွက်​
ကူညီ​ပေး​နေတဲ့ အဖွဲ့ ​တွေ ရှိပါတယ်​။ကျွန်​​တော်​ဆိုရင်​လည်း MSC အဖွဲ့ကပါ။ ပြီး​တော့ ​နောက်​ထပ်​လည်း
C square အဖွဲ့က Vote ​ပေး ကူညီ​နေပါတယ်​။
ဒီ အ​ကြောင်းကိုလဲ ​အောက်​က Link မှာ သွား​ရောက်​ ဖတ်​ရူ့နိင်​ပါတယ်​။
ဘယ်​လိုပဲ ဆိုဆို ကျွန်​​တော့်​တို့ Steemit သုံးသူ​တွေဟာ Upvote များများ ​ထောက်​ပံ့သူများများ ရှိ​လေ ​ကောင်း​လေပဲ မဟုတ်​လား ခင်​ဗျာ။
ကျွန်​​တော်​ တို့ Steemit မှာ ဝင်​​ငွေ အနည်းငယ်​ ရ​နေတယ်​ဆိုရင်​​တောင်​ ကျွန်​​တော်​ တို့ C square Myanmar အဖွဲ့သား​တွေကလည်း Steemit သုံးစွဲသူ​တွေကို အသင့်​အတင့်​ ပမာဏ ​သော ဝင်​​ငွေကို ဖြည့်​​ပေးပါရ​စေဗျာ။
အ​ပေါ်က Link မှာ C square Myanmar အတွက်​ Logo ​လေး လုပ်​ခိုင်းထားတာကို လည်း ကူညီ​ပေးကြပါအုံး။ ပြီး​တော့ ကျွန်​​တော်​ လုပ်​ထားတဲ့ C square. Myanmar Logo ​လေးကိုလည်း ​ဝေဖန်​အကြံ ပြု​ပေးကြပါအုံးဗျာ။
‌eSteem isaMobile📱& PC💻 app. for Steem with great features. Also, you get Incentives posting through eSteem apps. nnnwwwwwwww
IOS devices Apple StoreDownload](https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=1141397898&mt=8)Download) eSteem Surfer for your PC💻**
Available for all OS GithubJoin](https://github.com/esteemapp/esteem-surfer/releases)Join) eSteem Discord https://discord.gg/UrTnddTJoin](https://discord.gg/UrTnddT)Join) eSteem Telegram http://t.me/esteemappProud](http://t.me/esteemapp)Proud) to beamember of The Steemians Directory
myanmar esteem steemit steemmonsters blog
3 months ago by lwanwai (57)
@lwanwai, အီး စ တင်း ကို အ သုံး ပြု သည့် အတွက် ကျေး ဇူး တင် ရှိ ပါ သည်။
mamamyanmar (61) ·3months ago
အေး ပျောက်နာနော် vote မယ်ဆို ကြည့်လိုက် မရှိလိုက် မို့
ဟုတ်​တယ်​ မမ မအားတာနဲ့ အားမှ တက်​ဖြစ်​တာ ဒါ​ကြောင့်​ သူငယ်​ချင်း​တွေအတွက်​ auto vote ​လေး လုပ်​ထားရတာ 😃😃
lwinoomg (49) ·3months ago
ဟုတ်​ အကို ပြန်​ ​ဖောလိုး ​လိုက်​ပါ့မယ်​ 😄😄
​ဖောလိုးထားတာ ကြာပီ 😄😄
htwegyi (59) ·3months ago
လိုဂို လေးက မိုက်တယ် ရွေးပါစေဗျာ
ဟုတ်​ ဦး​ထွေး ​ကျေးဇူး 😍😍
billionairehein (63) ·3months ago
C2 က အလုပ်ဖြစ်နေပေါ့
ဟုတ်​တယ်​ ကိုဟိန်း ပြန်​စ​နေပြီ 😀
yuzana (59) ·3months ago
တူတူပဲ ကိုယု​ရေ 😄
Thanks for your support me 😊
kyawthuhein (45) ·3months ago
ဟုတ်​ အား​ပေးလို့ ​ကျေးဇူးပါ 😄😄
chirstonawba (8) ·3months ago
​ကြောက်​စရာမလိုပါ ဘုရား ကိုယ်​​တွေးတာ​ရေး ကိုယ်​ကြိုက်​တာ ရိုက်​တင်​ အဆင်​​ပြေ​နေတာကို 😊😊
​ကြောက်​စရာမလိုပါ ဘုရား ကိုယ်​​တွေးတာ​ရေး ကိုယ်​ကြိုက်​တာ ရိုက်​တင်​ အဆင်​​ပြေ​နေတာကို 😊😊 ဓတ်​ပုံ တင်​မိလည်း ကိုယ်​ယူတဲ့​နေရာကို Link ညွန်း​ပေးရင်​ ရပါတယ်